Kaddib furitaanka duullimaadyada, Kenya oo qofka rakaabka ah ee Somalia ka doonaysa 3 shuruudood | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Kaddib furitaanka duullimaadyada, Kenya oo qofka rakaabka ah ee Somalia ka doonaysa...
Kaddib furitaanka duullimaadyada, Kenya oo qofka rakaabka ah ee Somalia ka doonaysa 3 shuruudood
Haddaba, waxaa jira shuruudo laga doonayo qofkii u safraya Kenya ee ka imanaya dhanka Somalia, kuwaasoo ka kooban 3 shuruudood:
1 – Qofku waa inuu sitaa shahaadoo diidooley ah oo ah PCR sheegaysa in aanu qofku qabin cudurka Covid-19 oo la qaaday 96 saacadood safarka kahor.
2 – Dhamaanba carruurta ka yar da’da 5-sanadood waa laga dhaafay iyaga tijaabada PCR.
3 – Qof kasta waxaa laga doonayaa inuu si online ah u buuxiyo form caafimaad kaasoo uu soo gudbinayo kahor inta aanu soo safrin.
Kenya ayaa sheegtay inay diyaar u tahay inay bog cusub oo xiriir wanaagsan ah la furto Wasaarad Dibadeedka iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Somalia.
Previous article”Marka ay ciidamadu Eritrea kasoo noqdaan haddana yaan la dhihin maxaa loo keenay!” – Wasiir Dubbe
Next articleARRINTA ERITREA: Mid maanta ka hoos baxday & mid hadda la gudboon DF, mid ka wareersan mucaaradka & midda u eg mujtamaca Soomaaliyeed